FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA DOUBLE DOODLE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Double Doodle Dog
Goldendoodle / Labradoodle na Golden Retriever / Labrador Retriever / Poodle Alika mifangaro
Charlie the Double Doodle amin'ny 1 1/2 taona— 'Doodle Double Double i Charlie. Ny reniny dia a Labradoodle ary ny rainy a Goldendoodle - tsirairay taranaka maro . Manana toetra mampino izy ary feno fitiavana, faharanitan-tsaina ary fahafinaretana. Tiany biby hafa sy ny olona. Afaka milalao miaraka aminao i Charlie amin'ny 100 kilaometatra isan'ora na any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mandritra ny tontolo andro eo amin'ny fandriana. Zero fandatsahana . Milanja 35 pounds izy, na dia samy hafa habe aza izy ireo. Alika mianakavy tsara !! '
Amerikanina Avaratra Retriever
Ny Double Doodle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Goldendoodle ary ny Labradoodle na fitambarana isan-karazany ao amin'ny Golden Retriever , Labrador retriever ary ny Poodle . Ny Goldendoodle dia Golden Retriever niampita tamin'ny Poodle ary ny Labradoodle dia lakroa teo anelanelan'ny Labrador Retriever sy ny Poodle. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro . Vokatr'izany, na dia niampita toy ny Goldendoodle sy Labradoodle aza ny Double Doodle dia 1/4 Golden Retriever foana, 1/4 Labrador Retriever ary 1/2 Poodle. Miankina amin'ny alika iza no ray aman-dreny. Izy ireo dia mety ho fitambarana isan-karazany amin'ny Labrador Retriever, Golden Retriever ary Poodle. Ny fangaro dia nantsoina anarana isan-karazany, toy ny Double Doodle, North American Retriever ary Golden Labradoodle. Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany rehetra ianao.
Charlie the Double Doodle amin'ny 1 1/2 taona mipetaka amin'ny seza fandriana.
Banshee the Double Doodle amin'ny faha-7 volana sy tapany— 'Ny reniny dia sôkôla Labradoodle ary ny dadany dia Goldendoodle miloko. Ny mainty kely rehetra dia nivadika mainty. Volon'ondry be volon'ondry. Nanapa-kevitra ny hikarakara azy aho ary toy ny nomen'izy ireo alika hafa aho! '
ahoana ny Amerikana lehibe bulldogs
'Gwendolyn ity. Izy dia lakroa eo anelanelan'ny a Labrador retriever ary a Miniature Goldendoodle , antsoina hoe Labradoodle volamena. Ny vadiny dia a volafotsy Labrador Retriever ary ny tohodranony dia a Golden Miniature Goldendoodle . Hendry tokoa izy ary mora ny mampiofana. Nahazo diplaoma ambony amin'ny kilasy fankatoavana i Gwen ary izy no alika tsara fitondran-tena indrindra fantatro! Raisiko izy ho mandeha an-tongotra kilometatra isan'andro . Tiany ny fampihetseham-batany! '
'Gwendolyn dia hazo fijaliana eo anelanelan'ny a Labrador retriever ary a Miniature Goldendoodle . '
'Bo ilay alika kely Golden Labradoodle — ilay reny dia a Goldendoodle / Labradoodle afangaro ny ray dia a Labradoodle . Tsy misy mahalala ny toerana niavian'ny tongony sy tongony goavambe. '
Lisitry ny alika mifangaro Goldendoodle mifangaro
Lisitry ny alika mifangaro mifangaro Labrador Retriever
poodle sy volamena retriever Mix amidy
fampahalalana momba ny alika corse cane
ohatrinona ny poodles mahazatra
pincher kely sy tertera mifangaro
sôkôla laboratoara rottweiler Mix alika kely
antsasaky anglisy bulldog sasany bulldog frantsay